Starbucks, Waxaad Noqon Lahayd Mid Bulsho Wanaagsan | Martech Zone
Starbucks, Waxaad Noqon Laheyd Mid Bulsho Wanaagsan
Talaado, Disembar 29, 2015 Talaado, Disembar 29, 2015 Douglas Karr
Waxaan u jiidayaa kaarka warbaahinta bulshada markaan yaraado. Shakhsiyan, milkiile ganacsi ahaan, inta badan waan argagaxaa markaan arko macmiil si cad karbaash ugula kacaya shirkad khadka tooska ah. Gaar ahaan markay siyaasad tahay oo aan caadi ahaan khaladka wakiilka adeegga macaamilka. CSR badanaa ma samaystaan ​​xeerarka, caadi ahaan waa qof ka sareeya oo waxyar oo aan gaarin gaadha waxyaalahaas.
Xaaladdan oo kale, in kastoo, waa inaan si wada jir ah ula wadaaga dhacdadan maxaa yeelay waxay tilmaamaysaa arrimo ay shirkado badani la halgamayaan markay tahay warbaahinta bulshada. Sidoo kale, maahan shirkad kasta… waa astaan ​​xoog leh oo leh faa iidooyin faa'iido leh laba jeer celceliska ganacsiga. Taasi waxay ka dhigan tahay inay awoodi karaan inay dhageystaan, oo ay awoodaan inay saxaan arrintan si ay u horumariyaan baraha bulshada ee ay ka taagan yihiin macaamiishooda.
Toddobaadkan dhammaadkiisa, waxaan dib ugu soo laabtay Florida illaa Indiana. Waa safar aan qaato rubuc kasta waxaanan ku raaxaystaa wadista aamusnaanta, muuqaalka, iyo waqtiga looga fikiro waxyaabaha. Anigu waxaan ahay qof qaxwaha jecel (Starbucks ayaa laga yaabaa inay argagaxdo haddii ay ku arkaan miisaaniyaddeena sanadlaha ah ee shirkadeena yar kaadhkeena Starbuck) oo inta badan jadwalkeyga u samee jadwalka halka ay ku taal Starbucks bixitaanka soo socda.
Magaalada McDonough, GA, waxaan uga baxay I-75 oo waxaan dhowr mayl u waday Starbucks. Markii aan galay dukaankii, waxaan galay qolkii ragga oo naxdin baa i gashay. Qashinka ayaa buux dhaafiyay dhulkuna wuu daboolay. Uma sharixi doono carafta, kaliya inay iska cadahay inay waqti dheer soo daahday. Maaha inaanan filayn in suuliga u dhow wadada weyn ee mashquulka badan uu noqdo mid bilaa less ah laakiin kani ma ahayn kaalin shidaal, ee wuxuu ahaa Starbucks aan jeclahay
Waxaan istaagay safka waxaanan daawaday hal barista oo dariiqa maraya, iyo mid kale oo ku ordaya agagaarka waali isagoo safka la socda. Waxaan tiriyey 5 shaqaale dheeri ah oo macno ahaan taagan oo aan waxba qaban. Ka dib markii aan helay cabitaankaygii, waxaan aaday miis waxayna umuuqatay in aan saacado lagu tirtirin. Waxaa jiray xirmooyin caws ah iyo gogol xaadh ah oo ku daadsan dhulka u dhexeeya calaamadaha daadashada. Waan taahay oo banaanka ayaan u baxay meeshii aan sawirkan ka qaaday oo aan ku wadaagay barta Twitter-ka.
@Starbucks dukaankani waa wasakh. Gudaha, bannaanka, musqulaha, wax walba. Iyo koox shaqaale ah oo hareeraha taagan. pic.twitter.com/gFFxKEya46
- Douglas Karr (@nacaybtire) December 27, 2015
Jawaab ma aanan helin, laakiin mid kale oo raacaya ayaa soo galay oo weydiiyey halka ay ku taalo Starbucks… markaa waan u jawaabay oo waxaan ku daray Starbucks.
@harrisja @Starbucks I-75 gudaha McDonough, GA. Musqusha wey dhaaftay sawir qaadis.
Qoraalkeyga asalka ah wuxuu ahaa 2:11 PM. Starbucks ugu dambeyntii waxay ka jawaabeen 4: 09 PM:
@douglaskarr Waan ka walwalsanahay - fadlan faahfaahinta emaylka u dir twittercustomerservice@starbucks.com w / dukaanka info: https://t.co/osOKugph5J. Cafis.
- Caawinta Starbucks (@starbuckshelp) December 27, 2015
Ugh. Marnaba kama jawaabin.
Waxaa laga yaabaa xilligii ciidaha, Starbucks warbaahinta bulshada inay aad ugu mashquulsanaayeen inay fiiro gaar ah u yeeshaan qoraalkeyga. Waa hal tweet, sax? Waa hagaag, nooc ka mid ah. Dhamaan dadka booqday dukaankaas wasakhda ah maalintaas, miyaan ahaa qofka kaliya ee ku wargeliyay arrin?
Immisa aan Buckees ahayn ayaa soo galay oo la baxay dukaankan iyaga oo ah aragtidooda koowaad? Immisa xertayda ka mid ah ayaa lumiyay iimaan yar sumaddii ay jeclaayeen. Immisa labadoodaba ah ayaa hadda raadsada dukaan kale oo kafee ah oo wadada dhinaceeda ah halkii ay ka ahaan lahayd Starbucks maxaa yeelay iswaafajinta dukaankooda quruxda badan ayaa hadda la carqaladeeyay? Waan ogahay inaanan dhaqso u tagi doonin bakhaarkaas waqti dhaw.
Waa tan waxa aan jeclaan lahaa inaan ku arko Tweet ka Starbucks:
Waan ka walwalsanahay, waxaa loo yaqaan maareeyaha dukaanka. DM ii so si aan adiga kaaga dhigno. Jason
Ma adkaan lahayn in la helo bakhaarka, waad isticmaali kartaa barnaamijka Starbucks ama astaantooda:
Wixii Starbucks iyo shirkad kasta oo kale oo kormeera warbaahinta bulshada, waa kuwan casharradii laga bartay:
Response Time - Sidii aan u fadhiyey Starbucks, wey fiicnaan laheyd inaan jawaab helo. Laba saacadood ka dib waxay i tuseen inaysan iyagu dan ka lahayn
Awood - Qofkaaga baraha bulshada miyuu dhab ahaan weydiiyey me inaad qof u dirto? Maxaadse awood u siin weyday inaad laxiriirto maareeyaha dukaanka naftaada?
Iska yaree - Markasta suurtagal maahan in shirkaduhu qalad ku kabsadaan, laakiin arrinta way yareyn karaan iyagoo muujiya qadarin. Ku siinta dhibco kaarkayga Starbucks way fiicnaan lahayd.
Shakhsi ahaan - Dhammaanteen waan necbahay magacyada aan magaca lahayn. Waxay noqon laheyd ku mashquulid iyo shaqsi ahaanba inaad ku saxiixdo magacaaga (hadda waxaan qiyaasayaa magac).
Weli waxaan ahay taageere Starbucks waxaanan rajeynayaa inay dhageysan doonaan jawaab celintaan ayna hagaajinayaan hannaankooda kormeerka bulshada.
Tags: Media Social Suuqkormeerka warbaahinta bulshadajawaabta warbaahinta bulshadakormeerka bulshadastarbucksstarbucks bulshadaTwitter